विदेश जाने कामदारको खै ऐन ! मेनपावर लाई चाहिँ चैन नै चैन « News24 : Premium News Channel
विदेश जाने कामदारको खै ऐन ! मेनपावर लाई चाहिँ चैन नै चैन
सरकारले वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारले शून्य खर्चमा जान पाउने कार्यक्रम ल्याए पनि म्यानपावर कम्पनीले मनोमानी गर्न छाडेका छैनन् । शून्य खर्चको मागपत्र नआएको भन्दै कामदारसँग म्यानपावर कम्पनीले लाख रुपैयाँ नै लिन्छन् । सरकारले ३१ असारभन्दा अघिका श्रम स्वीकृतिको म्याद ३ वर्ष तोकेकाले म्यानपावर कम्पनीलाई मनोमानी गर्न सहज भएको छ ।
शून्य भिसाको मागपत्र आए पनि सरकारको अनुगमन प्रभावकारी नभएकाले कामदारले त्यसको लाभ उठाउन सकेका छैनन् । यसरी जाने कामदारले लाख रुपैयाँ तिर्नुपरिरहे पनि रसिद भने दिँदैनन् । नियमनकारी निकाय वैदेशिक रोजगार विभागले यसमा केही गर्न सकेको छैन । संयुक्त अरब इमिरेट्सको सेक्युरिटी गार्डमा ३ लाख रुपैयाँसम्म म्यानपावरले कामदारसँग लिन्छन् । विभागको श्रम स्वीकृतिमा नि:शुल्क भिसा र हवाईजहाज टिकट उल्लेख्य मात्रामा निस्किरहेको भए पनि सबै कागजमा सीमित छ । विभागको अनुगमन झारा टार्ने ढंगमा भइरहेको पीडित कामदारको गुनासो छ । शान्तिनगरका विवेक राईले विभागले अनुगमनका नाममा नौटंकी गरिरहेको बताए ।
‘विभागका कर्मचारीले म्यानपावर सञ्चालकसँग मिलेमतो गरी आर्थिक लाभ लिने भएकाले अनुगमनबाट एउटा पनि म्यानपावर कम्पनी कारबाहीमा परेका छैनन्,’ उनले भने, ‘यहीकारण कामदार लाख रुपैयाँ तिर्न बाध्य छन् ।’ अनुगमनमा जाने विभागका कर्मचारीले ठगी गर्ने म्यानपावर कम्पनीसँग प्रतिकामदार ५ हजार रुपैयाँ लिएर उन्मुक्ति दिइरहेको विभाग स्रोतले जनायो । कामदारसँग रकम बढी लिएर थोरै रुपैयाँको रसिद दिने र अन्य ठगीमा संलग्न रहेको उजुरीका आधारमा ६० म्यानपावर कम्पनीमाथि अनुगमन गर्ने तयारी पनि विभागमा सशक्त नेतृत्व पंक्ति नहुँदा स्थिगित भएको विभागका एक निर्देशकले जानकारी दिए ।
विभागले अनुगमन भइरहे पनि म्यानपावर कम्पनीले दुरुस्त कागजात मिलाउने र कामदार पनि सजग नहुँदा समस्या परेको जनाएको छ । विभागका निर्देशक जनकराज रेग्मीले म्यानपावर कम्पनीमाथि छड्के निगरानी गर्न लागिएको बताए । नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।